Hagaha Bilowga: Waa maxay Web Hosting? Waa maxay Domain? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka - WHSR
Qalabka Muhiimka ah & Hagaha
Casharrada Walkthrough casharrada iyo adeegyada aad u baahan tahay si aad u abuurto websaydhkaaga ugu horreeya.
Saddex Siyaabood oo Loo Abuuro Degel
Diiwaan Galiyayaasha Ugu Fiican
Website-yada ugu fiican
Bixiyeyaasha Shahaadada SSL ee ugu Fiican
Hawlaha Shabakada Dibedda
Sida loo martigaliyo Website
Sida loo Bilaabo Blog Guul leh
Sida Loo Abuuro Bakhaar Khadka Tooska ah
Sida loo Bilaabo Blog Blogga Hooyo
Sida Loo Dhiso Goob Qoraaleed Qoraaleed
Xulo Xuquuqda Martigelinta
Sida Loo Bedelo Marti Geliyaha Webka
Sahan: Qiimaha Marti Gelinta Websaydhka
Hagaha ugu dambeeya ee martigelinta emaylka
Shabakadda Is-barbar-barista Webka
Bixiyeyaasha Cloud Cloud ugu Fiican
Bixiyeyaasha ugu Fiican ee Bilaashka ah
Sida loo dejiyo VPN
Isbarbar dhig Adeegyada ugu Fiican VPN
VPN ka shaqeeya Shiinaha
Sida loo qariyo cinwaankaaga IP
Dejiso SSL-ga boggaaga
Sidee ugu nugul yahay Marti-geliyaha Websaydhkaagu
Tilmaamaha Amniga Biz ee Yaryar
Tilmaamaha Amniga ee Websaydhka
Sida Loo Helo Webka Madoow
Xaaladda Qarsoon ee Sharaxa
50 Fikradaha Ganacsiga ee tooska ah
Shaqo Ka Raadi Shaqooyinka Guriga
Tilmaamaha Suuq-geynta Shirkadda
Raadi Shaqooyin Qoris Madaxbanaan
Ku iibi Fankaaga khadka tooska ah
Sida loo hagaajiyo Blog-kaaga (Bogga)
Dhis oo rog Dhig boggaga internetka in ka badan $ 100,000
SEO ee Dummies
Tilmaamaha Siyaasadda Asturnaanta ee Biz-yar
Suuqgeynta Emailka ee Ganacsiyada
Kaydinta Daruuraha ee Ganacsiyada
Xalka Biz: Goobaha sida AppSumo
Biz Solutions: Goobaha sida PayPal
Qiimaha rasmiga ah ee lagu socodsiinayo Degel Ganacsi
Bilaash 50 Astaamo Asal ah
1,200 + Bilaash Bilaash ah
Mawduucyada Websaydhada Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Uruurinta Websaydha Shakhsiyeed ee Ugufiican
Farta Weyn ee Farta Weyn
Fikradaha Naqshadeynta Websaydhka Wix
Fikradaha Naqshadeynta Weebly Weebly
Marti gelinta AltusMarti gelinta ugu sareysa EU waxay ka bilaabataa $ 5.95 / mo.
Soo iibsoDhismaha dukaanka ugu fiican ee tooska ah ($ 29 / mo).
SitejetDhismayaasha shabakadda ee wakaaladda ($ 19 / mo).
ExpressVPNBixiyaha VPN ee ku saleysan BVI ($ 8.32 / mo.)
WixDhise degel fudud ($ 12.50 / mo).
WixDhismaha bogga ugu dambeeyay ($ 15.99 / mo).
SurfSharkBixiyaha VPN ee ku saleysan BVI ($ 2.49 / mo.)
ScalaHostingMartigalinta SPanel VPS waxay bilaabataa $ 13.95 / mo.
SiteGroundHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 6.99 / mo.
WeeblyDhismayaasha caanka ah ee dhismaha ($ 12 / mo).
ZyroDhisid degel jaban oo loogu talagalay cusub ($ 1.99 / mo.)
NordVPNBixiyaha VPN ee ku saleysan Panama ($ 3.49 / mo.)
Nagu saabsanKooxda WHSR ilaa 2008.
WHSR BlogUruurinta dhammaan maqaalladayada iyo cilmi baarista.
Dib u eegista WHSRIsbarbar dhig dhammaan adeegyada martigelinta hal bog.
Qalabka WHSRMuuji macluumaadka tiknoolajiyada degel kasta.
Bogga ugu weyn / WHSR Blog / Hagaha Bilowga: Waa maxay Web Hosting? Waa maxay Domain? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Maqaalka waxaa qoray: Jerry Low
La soo saaray: Oct 06, 2020
Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: magac domain, martigalin web, iyo degel horumaray. Laakiin waa maxay magac domain? Waa maxay martigelinta shabakadda? Miyaanay isku mid ahayn? Waa muhiim inaad si cad ugu kala aragti duwanaato wixii ka soo kordha ka hor intaadan u dhaqaaqin abuuro iyo martigeli boggaaga koowaad.
Marti gelinta Websaydhka
Waa maxay martigelinta websaydhada
Noocyada kala duwan ee marti-gelinta websaydhka
Waa maxay magaca domain
Sidee magaca diiwaangelinta magacu u shaqeeyaa
Shabakada Martigalinta vs Magaca Magaca
Sawirka: Maxay ku kala duwan yihiin
Miyaad ka iibsan kartaa isla goobta iyo martigelinta shabakadda isla goobtii
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Bogga Martigelinta iyo Magaca Magaca
Waa maxay Web Hosting?
Aqoonsiga webka waa kombuyuutar ay dadku ku kaydiyaan website-yadooda. Ka feker sida guriga aad ku kaydiso dhamaan alaabtaada; laakiin halkii aad ku keydsan lahayd dharkaaga iyo alaabta guriga, waxaad kaydisaa faylasha kombiyuutarka (HTML, dukumiintiyo, sawirro, fiidiyow, iwm) ee martigeliyaha webka.
Diiwaangelinta Domain - Sidaas ayaad ka iibsan kartaa oo maamuli kartaa domain iyo martigalinta isla bixiyaha
Website-dhejiye - Qalabka qaab-sameynta bogga-iyo-dhicidda si loo abuuro website
Email martigelinta - Inaad dirto oo aad hesho emayl [Email ilaaliyo]
Talo: Waxaad u isticmaali kartaa qalabkeena bilaashka ah bogga hore ogow cidda martigalinaysa degel.
Xarun xogeed waxay noqon kartaa qol, guri, ama dhismo aad u ballaaran oo leh qalab aan awood lahayn ama tamar dabayl ah, xiriiro xog-is-weydaarsi la'aan ah, kontaroolo deegaanka - ie. qaboojinta, xakamaynta dabka, iyo aaladaha amniga.
Tani waa server. Magaca tusaalahan: DELL 463-6080 Server. Waxay u muuqataa oo waxay u shaqeysaa sidii desktop-kaaga gurigaaga - wax yar ka weyn oo ka xoog badan.
Dhibaatooyinka - Lahaansho la'aan asaasiga ah, awood xadidan oo lagu xakameyn karo heerarka gaadiidka ama sarifka, waxqabadka goobta ayaa saameyn ku yeelan kara bogag kale oo isku mid ah.
Waa imisa qiimaha - Aan ka badneyn $ 10 marka la saxiixo.
Halkee laga heli karaa adeegyada martigelinta la wadaago: A2 Hosting, Soo dhaweynta, InMotion Hosting
Xafiiska Adeegga Gaarka ah ee VPS (VPS)
Server-ka gaarka ah ee shirkadda gaarka ah ee martigelinaya waxay u kala qaybisaa server-yada server-yada farsamada, halkaas oo bogag kasta oo ka mid ah uu u egyahay martigelintooda server-ka gaarka ah, laakiin waxay dhab ahaantii wadaagaan server oo leh dhowr qof oo kale oo kala duwan.
Isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa in ay helaan xidid si ay meel bannaan oo u gaar ah iyo jawi martigelinta si fiican loo ammaanay noocan ah martigelinta. Shabakadaha u baahan in la xakameeyo xajmiga heerka heerka, laakiin ma rabaan in ay maalgashadaan server-ga gaar ah.
Dhibaatooyinka - Awoodda xadidan ee lagu xakamaynayo heerarka gaadiidka ama sarifka sare, waxtarkaaga goobta ayaa wali aad u saameeya goobaha kale ee serverka.
Waa imisa qiimaha - $ 20 - $ 60 / mo; kharashyo dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa u baahan baahida gaarka ah ee server ama software gaar ah.
Nidaam gaar ah ayaa bixisa kantaroolka ugu sareeya ee server-ka webkaaga lagu kaydiyo - Waxaad si gaar ah u kireysataa dhammaan serverka. Boggaaga (s) waa bogga kaliya ee lagu kaydiyo serverka.
Dhibaatooyinka - Iyadoo awood weyn ay timaado ... si fiican, kharash badan. Qodobbada loo yaqaan 'Customers' waa kuwo aad u qaali ah oo waxaa kaliya lagula talinayaa kuwa u baahan kantaroolka ugu sareeya iyo waxqabadka serverka.
Waa imisa qiimaha - $ 80 / mo iyo kor; qiimaha ku salaysan qiyaasaha adeegga iyo adeegyada dheeraadka ah.
Xagee loo helaa adeegyo martiqaad ah: AltusHost, InMotion Hosting, TMD Hosting
Hoyga martida ayaa bixiya awood aan xadidneyn oo lagu xakamaynayo gaadiidka ama taraafikada. Waa kuwan sida ay u shaqeyneyso: Koox ka mid ah xafladaha (loo yaqaan daruur) ayaa wada shaqeynaya si ay u martigeliyaan kooxo internet ah. Tani waxay u oggolaaneysaa kombiyuutarro badan inay wada shaqeeyaan si ay ula tacaalaan heerarka sare ee taraafikada ama sarbeebyada bogga gaarka ah.
Dhibaatooyinka - Qalab badan oo marti geliya maaha inay bixiyaan adeegyo asal ah (loo baahan yahay in la beddelo goobaha adeegga iyo rakibo software qaar), kharash badan.
Waa imisa qiimaha - $ 30 iyo kor; macaamiisha marti geliya daroogada ayaa badanaa lagu soo oogay iyadoo loo eegayo qaab-isticmaalka.
A domain waa cinwaanka website-kaaga. Ka hor inta aanad samayn karin bog internet, waxaad u baahan doontaa domain.
Magaca Domain ma aha wax jir ahaaneed oo aad taaban karto ama arki karto. Waa xaraf jilayaal ah oo ku siiya boggaaga aqoonsi (haa, magac, sida aadanaha iyo ganacsiyada). Tusaale ahaan magac domain: Google.com, Alexa.com, Linux.org, eLearningEuropa.info, iyo sidoo kale Yahoo.co.uk.
Dhamaan magacyada domain waa mid gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in ay jiri karto oo keliya halbeegyada shabakadaha caalamka. Ma diiwaangelin kartid magac marka ay diiwaangashadaan kuwa kale (ay maamusho ICANN).
Si aad u raadiso oo aad diiwaangeliso magac domain, isku day Magaca Kharashka.
Maxay yihiin Domain Dheer (TLDs)?
Fahmidda domainka hoose, heerka heerka labaad, iyo domain heer sare.
Domain Name System (DNS), waxaa jira magacyo kala duwan. Meelaha sare ee Dheeraadka ah (TLDs) ayaa ah qaar ka mid ah magacyada guud ee madaxda sare - COM, NET, ORG, EDU, INFO, BIZ, CO.UK, iwm.
Fiiro u yeelo in arimahaani ay ku dhammaadaan "dheeraad ah" (.com, .org, .co.uk)? Kordhintaas waxaa loo yaqaan 'TLDs'.
Liiska rasmiga ah ee dhammaan meelaha ugu sarreeya waxaa haya Hay'adda Internetka ee loo yaqaan "Numbers Author Managed Numbers" (IANA) at the Root Zone Database. Laga soo bilaabo Abriil 2018, waxaa ku jira 1,532 TLDs guud ahaan.
Qaar ka mid ah TLDs ayaa caadi ahaan la arkaa -
BIZ, BR, CA, CN, CO, CO.JP, COM.SG, COM.MY, EDU, ES, FR, INFO, MOBI, TECH, RU, UK, Mareykanka,
Qaar ka mid ah wax yar ayaa laga yaqaan -
Inkastoo intooda badan TLDs ay u furan yihiin diiwaangelinta dadweynaha, waxaa jira sharciyo adag oo ku saabsan diiwaangelinta domain qaarkood. Tusaale ahaan diiwaangelinta heerarka sare ee koodhka waddanka (sida .co.uk Boqortooyada Ingiriiska) ayaa xaddidan muwaadiniinta waddanka udhaxeeya; iyo waxqabadyada websaydyadaas oo kale ah waxaa xukuma xeerarka maxalliga ah iyo sharciyada internetka.
Lacagaha qaarkood ee TLD-yada waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo 'astaamaha' ee bogga internetka - sida BIZ ee ganacsiyada, EDU ee waxbarashada (dugsiyada, jaamacadaha, jaliyada, iwm), ururka ORG ee ururada bulshada, .
ICANN waxay daabacdaa daraasad xaaladeed oo ku saabsan isticmaalida TLD-ga guud ee kala duwan, iska hubi haddii danahaan adiga kugu habboon.
Waa maxay Domains Level Level Domains (ccTLDs)?
Liiska buuxa ee soodhawrka heerarka sare ee waddanka (ccTLD) waa:
.ac .ad .ca .af .ag .ai .al .am .an .ao .aq .ar .as .at .au .aw .ax .az .ba .bb .bd .be .bf .bg .bh .bi .bj .bm .bn .bo .br .bs .bt .bw .by .bz .ca .cc .cd .cg .ch .ci .c .cl .cm .cn .co .cr .cu. .cv .cx .cif .c .d .de .d .deg .deg .ge .gf .gg .gh .gi .gl .gm .gn .gp .gr .g .gg .g .g .gg .h .gg .im .in .io .iq .ir .is .it .je .jm .jo .jp .ke .kg .kh .ki .km .kn .kp .kr .kw .ky .kz .la .lb .lc .li .kuu .ko .ls .lt .lu .v .ly .ma .mc .md .m .mg .mx .mx .m .am .m. .mx .mx .mx .mx .mxul .n .n .m .n .m .n .li .ko .nuu .n .nm .m .ko .p .p .gg .ph .pk .pl. .pn .pr .ps .pt .p .pg .py .qa .re .rs .ru .r .ya .s .gg .d .a .a .ya .a .a .a .a .a .day .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a. .uz .va .vc .ve .vg .vi .vn .vu .wf .ws .ya .za .zm .zw
Xeerarka ku saabsan ccTLDs
Kuwa isticmaalaya kuwaas oo raadinaya inay iska diiwaangeliyaan xulasho magac domain gaar ah oo doorasho ah (sida ".us" ama ".co.uk"), qayb wanaagsan oo ka mid ah hannaanka diiwaangelinta ayaa u go'an in la go'aamiyo in macaamiishu yahay deggan ee dalkaas sidaas darteed sharci ahaan waa loo ogol yahay inuu soo iibsado mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee waddankooda (oo ka hadli doona tan dambe). Taasi waa in ay guriga ku dhejisaa barta labaad ee dadka isticmaala.
Inkastoo ay jiraan boqolaal ka mid ah magaca domainka ee la heli karo (sida ".com" ama "netnet"), badan oo ka mid ah aaladahaasi waxay leeyihiin shuruudaha diiwaangelinta gaarka ah.
Tusaale ahaan, ururrada kaliya ayaa iska diiwaan gelin kara magac domain "domain", oo kaliya muwaadiniinta Mareykanka waxay diiwaangelin karaan magaca domain ee ku dhammaada ".us." Inaad ku qancisid shuruudaha iyo shuruudaha nooc kasta oo domain ah inta lagu jiro diiwaangelinta dhabta ah iyo lacag bixinta geedi socodka wuxuu dhalin doonaa magaca domainka ah "sii daaya" dib ugu soo laabto pool ee magacyada domain la heli karo; macaamiilku waa inuu soo xushay aag heer sare ah oo ay xaqiiq ahaan uqalmaan, ama iibiyaan iibsigooda oo dhan.
Inta lagu guda jiro nidaamka saxda ah, waxaa kale oo muhiim ah in si toos ah looga helo xog ururiyaha websaydhka, maadaama macluumaadkaasi u baahan doono marka la buuxinayo DNS iyo Macluumaadka diiwaanka MX inta lagu jiro diiwaangelinta.
Labadan rikoodhadan ayaa go'aamiya nooca martigelinta ee server-ka ee la soo bandhigo marka la isticmaalo marka user uu ku socdo domain, iyo sidoo kale sida emailka loo xalliyo, loo diro, iyo helitaanka xirmada martigelinta iyo magaca domain la xiriira. Macluumaadka aan saxa ahayn waxay dhalin doonaan qaladaadka iyo qaladaadka bogga.
Qaado mail.yahoo.com tusaale - yahoo.com waa domainka, mail.yahoo.com kiiskan, waa domainka hoose.
A domain waa inuu ahaado mid gaar ah (tusaale ahaan waxaa jiri kara oo keliya hal Yahoo.com) waana in laga diiwaan geliyo diiwaan-maamulaha (ie. NameCheap iyo dulsaar); halka loogu talagalay mawaadiicda hoose, isticmaalku si xor ah ugu dari karnaa meesha ugu sarreysa ee domainka hadda ilaa inta ay martigeliyahooda webka siiyaan adeegga. Qaarkood waxay yiraahdaan "sub-domains" waa 'sadexaad' 'domains' oo macnaha ay u leeyihiin inay yihiin "subfurnaan hoose" oo hoos imanaya liiska xididka domain, sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu abaabulo boggaga internetka ee luuqadaha kala duwan ama qaybaha kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha arrin aad u badan oo ay ku jiraan mashiinnada raadinta - waxaa la ogyahay xaqiiqda ah in makiinadaha raadinta (sida, Google) ay ula dhaqmaan domain hoosaad sida domain ka duwan oo ka madax banaan domain hoose.
Recap degdeg ah
finance.yahoo.com Yahoo maaliyadda com -
Sida Diiwaangelinta Magaca Domain
Waa tan sida diiwaangelinta domainku uga shaqeyso aragtida adeegsadaha.
Ka feker magaca wanaagsan ee aad rabto website-kaaga.
Magaca domainka wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid gaar ah. Diyaari dhawr nooc oo kala duwan - kaliya haddii ay dhacdo magaca ay qaadaan dadka kale.
Ka baari mid ka mid ah websaydhada diiwaan geliyaha (tusaale. NameCheap).
Haddii magaca domainka la doorto aan la qaadin, waxaad ku amri kartaa isla markiiba.
Bixinta khidmadda diiwaangelinta, $ 10 - $ 35 waxay kuxirantahay TLD (badanaaba isticmaalka PayPal ama credit card).
Hadda waxaa lagu sameeyaa habka diiwaangelinta.
Next waxaad u baahan doontaa inaad magac u sheegto magacaaga martigelinta (adiga oo bedelaya rikoodhka DNS).
Waxaan si qoto dheer uga wada hadalnay sida loo doorto magac domain wanaagsan, marka la barbardhigo qiimaha diiwaangelinta domain, iyo sharaxay habka iibsashada domainka hadda jira tusahan tilmaamahan domain.
Kumaa haaya habka diiwaan galinta diiwaan gelinta?
Waxyaabaha ayaa aad uga murugsan aragtida diiwaangeliyaha domain.
Nidaamka Diiwaangelinta Domain waxaa xukuma Shirkadda Internetka ee Magacyada iyo Nambarada la dhigay, ama ICANN.
Hay'adani waxay asal ahaan u tahay nidaam guud oo ah qaababka ugu wanaagsan ee diiwaan gelinta, martigeliyaha webka, iyo macaamiisha iyaga oo la falgalaya.
Marka la eego heerarka jirka, dhammaan macaamiisha diiwaangelinaya magaca domain waa inay diyaar u yihiin inay bixiyaan macluumaadka xiriirka iyaga naftooda, ururkooda, ganacsigooda, iyo xataa shaqaaleeyahooda xaaladaha qaarkood.
Magaca Magaca Macluumaadka WhoIs
Magaca kasta oo magac domain ah waxaa laga heli karaa diiwaanka dadweynaha oo dhan kuwaas oo ay ku jiraan macluumaadka shakhsiga sida milkiilaha, lambarka taleefanka, cinwaanka boosta, iyo diiwaangelinta domainka iyo weliba taariikhda dhicitaanka.
Waxaa loo yaqaan 'WhoIs' diiwaanka iyo liistada xirfadlaha iyo xidhiidhada domainka.
Sida looga baahan yahay shirkada Internetka ee Magacyada iyo Tilmaamaha (ICANN), mulkiilayaasha domain waa inay sameeyaan macluumaadka xiriirka ee laga heli karo buuga WHOIS. Diiwaankaas waxaa la heli karaa wakhti kasta qof kasta oo sameeya caqligal ah cidda raadisa.
Si kale haddii loo dhigo, haddii qof doonayo inuu ogaado cidda leh bog internet ah, dhammaantood waa inay sameeyaan baadhitaan degdeg ah WHOIS, ku qor magaca domain iyo voila, waxay heli karaan faahfaahinta diiwaangelinta bogagga.
Asturnaanta domain waa adeeg, badiyaa ay bixiyaan dadka diiwaan-gashan, si loo ilaaliyo macluumaadka macaamiisha 'shaqsiyeed iyo ganacsi. Asturnaanta Domainka ayaa ku beddeleysa macluumaadkaaga WHOIS macluumaadka ku saabsan adeegga gudbinta ee ay sameeyaan server wakiil.
Natiijada, macluumaadkaaga shakhsiyeed, sida cinwaanka jirka, emails, lambarka telefoonka, iwm ayaa ka qarinaya dadweynaha. Domain Privacy waa muhiim sababtoo ah diiwaankaaga domain (ie, macluumaadka WhoIs) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa siyaabo aan sharci ahayn ama la jecelyahay. Maadaama qof kasta uu ka fiirsan karo diiwaanka WhoIs, spamers, khaniisiinta, tuugada aqoonsiga iyo dabagalayaasha waxay heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed!
Shirkadaha caddaaladu waxay hubiyaan taariikhaha dhicitaanka taariikhda dhicid markaa u diraan rasmi ah "ogeysiin" cusbooneysiin ah iskuday si ay u helaan mulkiilayaasha domain si ay u gudbiyaan macaamiladooda shirkadooda, ama soo diraan qaansheege kuwaas oo u adeegaya soo-jeedinta mashiinka raadinta iyo adeegyada kale ee suaalaha ah.
Labadaba email iyo spam e-mailka labadaba waxay isticmaalaan macluumaadka loo yaqaan 'WhoIs' milkiileyaasha goynta goosashada e-maylka iyo la xiriir milkiilayaasha domain ee leh xaqiiqooyinka.
Tusaale ahaan WhoIs diiwaanka (faahfaahinta qarsoodi leh asturnaanta domain).
Farqiga u dhaxeeya host martida iyo magaca domain.
Si loo fududeeyo: Magaca domainka, waa sida cinwaanka gurigaaga; Shabakada martigelinta ee dhinaca kale, waa meesha aad gurigaaga dhiganeysid alaabtaada.
Halkii laga isticmaali lahaa magaca wadada iyo koodh-nambar, dhowr ereyo ama / iyo lambarro ayaa loo isticmaalaa magaca bogga '. Diskka kumbuyuutarka iyo xusuusta kombiyuutarka ayaa loo istcimaalo halkii laga isticmaali lahaa alwaax iyo bir kaydinta iyo habaynta faylasha xogta. Fikradda waxaa loo soo bandhigay si cad iyada oo lagu sawirayo jaantuska kore.
Maxay tahay wareer?
Mid ka mid ah sababaha cusubi u wareeray waa sababta oo ah diiwaangelinta domainka iyo adeegyada martigelinta webka waxaa badanaa bixiya adeeg bixiye isku mid ah.
Diiwaangalayaasha caadiga ah ee diiwaan gashan oo adeegsanaya adeega diiwaangelinta domainka oo keliya ayaa hadda bixiya adeegyo marti geliya bogga. Inta badan shirkadaha martigeliya webka ayaa leh xarun si ay u diiwaangeliyaan magaca domain ee isticmaalkooda. Xaqiiq ahaan, bixiyeyaasha badan ee martigeliyaasha waxay bixiyaan magac lacag la'aan ah (ama ku dhowaad bilaa lacag la'aan ah) si ay ugu guulaystaan ​​macaamiisha cusub.
Laakiin sug… taasi waa aniga aniga (waxaan ahay Diinsoor). Qaar badan oo ka mid ah maamuleyaasha websaydhada ayaa iibsada xarkooda isla markaana ku martigaliya isla isla hal meel. Waana wax caadi ah - gaar ahaan haddii aad ku nooshahay bixiye sumcad sumcad leh oo leh rikoor ganacsi oo wanaagsan. Waa tan ra'yi ka duwan oo laga soo xigtay Twitter:
@WebHostingJerry arkeen boostadaagii ugu dambaysay ee aad martigelisay. mahadsanid. qoraallo yar: namecheap dhab ahaantii waxay ku hayaan haya'daha martigalinta / magac domain ah, sidaa darteed waxba ma dhicin inay saameyn ku yeelato martigelinta ama domainka ama kan kale. in dhab ahaantii ahaa maskax run ah (isku xiri)
@WebHostingJerry maalinta dib ugu noqo, laakiin taasi waa tan ilaa markaa isbeddelay. anaga oo ah magacyada loo yaqaan'checheap 'ayaan si qoto dheer ugu qorney markii aan abuurnay shirkad marti-galin gooni ah, ku dhawaad, magacyadeena hoosta. way kala duwan yihiin. dad kala duwan. arag https://t.co/vNM0toRuIg
Wixii #2 - halkan waa tilmaamaha tafaasiisha ah ee ku saabsan sida ku wareeji magacaaga domain name Name Cheap. Oo halkan sida aad u sameyn karto GoDaddy. Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso
Hel Auth /Koodhka EPP oo ka socda diiwaangeliyahaaga hadda (kiiskan - shirkaddaada martigelinta)
Wakhtiga serverka, ikhtiyaarrada martigalinta martigelinta, qiimeynta, astaamaha gurmadka, guddiyada xakameynta, iyo saaxiibtinimada bey'ada ayaa ah astaamo muhiim ah oo tixgelin leh markaad dooraneyso martigeliyaha shabakadda. Kahor intaadan dooran, waxaad marka hore fahmi doontaa baahiyaha boggaaga - waa kuwan su'aalaha aad isweydiinaysid hadaadan aqoon meesha aad ka bilaabi lahayd.
Websaydh kastaa wuxuu caadiyan lahaan doonaa faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinka u gaarka ah marka la eego astaamaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato waxa ku habboon baahidaada. Si kastaba ha noqotee, qaar baa inta badan sameeya wax ka fiican kuwa kale. Waxaan dhisnay nidaam kormeer oo loogu magac daray “HostScore”- waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto xawaaraha martigelinta websaydhka iyo isku halaynta, sidaa darteed hubi inaad tixraacdo goobtaas ka hor intaadan bixin martigalinta.
Marka la soo gaabiyo - haa, waa suurtagal. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhkaaga si kalsooni leh waxay u baahan tahay maalgashi weyn oo xagga qalabka iyo kaabayaasha ah. Sida ugufiican uguna kalsoonida badan ee aad rabto in martigelintaada u noqoto, kharashka sare.
Sida looga iibsado magac domain diiwaangeliyaasha ama milkiilayaasha jira
Isbarbar dhig adeega martigelinta adeegsiga adigoo isticmaalaya qalabkayaga lacag la'aan ah
Founder of WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) - dib-u-eegid marti-gal ah oo lagu kalsoon yahay oo loo isticmaalo dadka isticmaala 100,000. In ka badan khibradaha 15 ee webka martigelinta, suuq geynta, iyo SEO. Ka qaybqaateeye ProBlogger.net, Business.com, SocialMediaToday.com, iyo in kale.
Tusaha Hagidda Webka
Xullo Martiqaadka Webka Tooska ah
Qorshayaasha Marti-gelinta ee Rakhiiska ah
Sida loo martigaliyo Website-kaaga
Immisa Bixinta Lacag Bixinta Web Hosting
Sida loo sameeyo Website-kaaga
Runta ku saabsan Adeegyada Marti-gelinta aan xadidnayn
Dib u eegista martigelinta ee dhawaan
Dib u eegida Zyma Hosting
Dib u eegida ZeroStopBits
Dib u eegida WP Engine
Dib u eegista WebHostingHub
Dib u eegida SkyToaster
Dib u eegida RoseHosting
Mawduucyadaas oo kale Sida tan
Intee inooga Baddan Bandwidth Waan u Baahanahay Websiteka?
PayPal Hosting: 10 Best Web Host oo aqbalaya Lacagta PayPal
Tilmaamaha Iibsashada Goobta: Sida Looga Iibsado Magaca Magaca Diiwaanhayaha ama Milkiilayaasha Jira
Sidoo kale Goobahayaga: HostScore
Baro Koodhka Naftaada: 6 Meelood oo Aad Isaga Kaga Barato Barnaamijyada
Sida Loogu Adeegsado AI iyo Barashada Mashiinka Ganacsigaaga
Ka Shaqeyso Guriga: Halka Laga Helo Shaqooyinka Internetka & Sida Loo Bilaabo